Kumjonsanson, Geumjeongsanseong Fortress - Busan
Asia Korea Atsimo Busan
Adiresy: Korea Atsimo, Busan, Qimjonggu
Taonan'ny fototra: 1703
Ny fiarovana lehibe indrindra any Korea Atsimo dia Geumjeongsanseong Fortre. Eo amin'ny tanànan'i Busan ao amin'ny Tendrombohitra Geumjeongsan izy io ary nanomboka tamin'ny 1971 dia ao anatin'ny lisitr'ireo harena manan-tantara ao amin'ny firenena eo ambanin'ny laharana 215.
Inona ny fiarovana?
Tany amin'ny Moyen Âge, ny Japone sy Manchu dia nanafika tsy an-kijanona ny saikinosy Koreana, izay tsy vitan'ny nandroba ny mponina tao an-toerana, fa namono azy ireo ihany koa. Taorian'ny nanafihan'ny Imjin Vaeran, dia nanapa-kevitra ny hanangana fiarovana miorina manerana ny morontsiraka ny mpanjaka avy any amin'ny faritr'i Joseon.
Nanomboka natsangana tamin'ny baikon'ny mpanjaka Suk-Jong teo amin'ny toeran'ny tranobe nopotehina (misy ny rakitsary ofisialy ao amin'ny lehiben'ny sambo Li Jikhen, izay manamarika ny faharavan'ilay trano mimanda) tamin'ny taona 1701. Ho an'ny fananganana, olona maherin'ny 1.000 no nampiasaina, ary ny asany dia notarihan'ny Governora Kensando antsoina hoe Cho Tahedon. Tamin'ny 1703, ny fanokafana ofisialy an'i Kimjonsanson.
Ny velarantanin'ilay tanàna dia 171 kilometatra toradroa. Ny velaran'ny tanàna. km. Tamin'ny taona 1707 dia nanamboatra rindrina mahery ny alam-baravarankely, ary nahatratra 1,5 metatra ny haavony ary nahatratra 3 metatra ny haavony.
Raha ny tena izy, dia vita tamin'ny vato voajanahary izy ireo, na izany aza, ho an'ny tranonkala sasany, ny tranon-kala manokana dia nampiasaina. Vodirindrina goavambe marobe no nidina avy teo an-tampon'ny Tendrombohitra Kumjonsan, ary nitady 50 kilaometatra teo ho eo avy ny polisy sy beam.
Noho ny habeny goavambe, ny trano fiangonan'i Kimjonsanson dia tsy azo ampiasaina amin'ny tanjony, satria sarotra ny miaro azy io. Noho izany antony izany dia nijanona foana nandritra ny taonjato iray ny tranobe. Tamin'ny 1807, nanomboka ny fanorenana indray ny mpitsara iray antsoina hoe Tonne-bu O Hannon. Nahavita ny vavahady andrefana izy tamin'ny voalohany, ary vonona ho an'ny iray hafa ny herintaona taty aoriana. Azonao atao ny mianatra momba ireo asa ireo avy amin'ny tsangambato velona.
Nandritra ny fibodoana Japoney tamin'ny 1910 ka hatramin'ny 1945 dia rava ny fiarovan'i Kimjonsanson, saingy nanomboka tamin'ny taona 1972 dia nomanina tamin'ny dingana maromaro izy io. Nanomboka ny asa tamin'ny famerenana ny vavahadin'ny ranomasina andrefana, atsinanana ary atsimo, izay efa vonona tao anatin'ny 2 taona. Tamin'ny 1989, nanokatra ny fidirana andrefana sy ny trano anatiny.
Inona no toetran'ny fiarovana Kymjonsanson?
Saika ny tranobe rehetra no naverina tamin'ny laoniny ary novonoina ny toerana teo amin'ny rindrina. Ny ankamaroan'ireo mpizaha tany dia ankafizin'ny tilikambo hita maso eo ambanin'ny laharana 1. Ity tilikambo ity dia miorina eo amin'ny faritra atsimo andrefana amin'ny manda. Ravan'ny rivo-doza mahatsiravina izay nitranga tamin'ny 1 Septambra 2002 izy io.
Mandritra ny fitsidihana ny fiarovana an'i Kymjonsanson, mandinika ireo toerana malaza toy ireto:
Ny vavahadin'ny tandrefana no fidirana amin'ny trano lehibe indrindra, na dia sarotra aza ny manatona azy;
Ny tilikambo mandro Mangro - miaraka amin'ny fomba fijery malaza;
vavahady atsimo - manana fomba tsotra sy mahazatra indrindra, noho izany izy ireo dia malaza amin'ny mpizaha tany;
Ireo lava-bato dia miparitaka manerana ny manda.
Koa satria any an- tendrombohitra i Kimjonsanson, dia haka rano fisotro, sakafo, fanatanjahan-tena sy fitafiana mafana ianao amin'ny fialantsasatra mahafinaritra. Io farany io dia ho mora foana amin'ny fotoana rehetra, satria misy foana ny rivotra mahery. Eo amin'ny rindrina dia mametraka lalan-tsarety manokana izay mitondra mankany an-tampon'ny hantsana.
Avy any afovoan-tanànan'i Busan ka hatrany amin'ny iray amin'ireo fidirana mankany amin'ny toeram-piasana dia azo aleha amin'ny fiara fitateram-bahoaka na amin'ny fiara fitateram-bahoaka 31, 148, 90, 50 ary 1002. Ny dia mandeha 2 ora. Misy fandaharana fitarihana koa eto.
Tranom-bakoky ny Nosy Maritime
Palace of Sultans of Malacca
Katedralin'i St. Peter (Bandung)
Ririnina roa loko
Hazo fetsy mandritra ny herinandro
Osteosynthesis ny clavicle
Bongo mamy 2016
Aggression sy fihetsika mahery vaika
Scintigraphy ny taolan'ny skeleton
Firaisana mandritra ny fifadian-kanina
Masoivohon'i Ekoatora ao Okraina
Ny Mozeana Olaimpika
Ahoana no hiomanana amin'ny fiterahana?
Divination amin'ny fitiavana amin'ny anarany
Ahoana ny fialana amin'ny fialonana amin'ny lehilahy?
Dokotera Art Deco
Lloyd Klein dia nihaona tamin'ny fiara vavy Joslin Wildenstein
Ny fiainan'i Kristen Stewart dia feno hetsika. Ary ahoana ny amin'ny fihetseham-po vaovao?
8 mponina any Atsinanana izay tsy taona